Isitolo Esilinganiselayo, Isitolo Sesitolo, Ifenisha Yesitolo - Changhong
ukuthengisa okubukwayo kufaneleka
ukuthengiswa okubonakalayo kokunikezwa
Izixazululo ze-Omnichannel / E-commerce
Isixazululo sokumaketha kwedijithali
Changhong eyasungulwa ngo-1992 elise Shijiazhuang Hebei China, eduze Beijing. I-Changhong inikela ngezinsizakalo ezihlukanisiwe zesitolo zamabhizinisi emikhiqizo, Ukuze ube yisithunywa sobuhle futhi umdali wendawo yebhizinisi eluhlaza umbono wethu. Inhlonipho, ubuqotho, isibopho, ukuqamba izinto ezintsha, ukuzijwayeza kanye nokubambisana kuyizindinganiso zethu eziyinhloko. Emakethe yaseChina, i-CH igxile ekwenzeni insizakalo eyodwa yezitolo ezitolo, kufaka phakathi ukwakhiwa, ukwenziwa, ukwenziwa kwezinto, ukwakha, ngemuva kwensizakalo nensizakalo yesondlo
Emakethe yaphesheya kwezilwandle, siklama, sakha futhi sithumele zonke izinhlobo zezinto ezitolo.
Ukulethwa kwesikhathi esisodwa
Isipiliyoni seminyaka engama-30
Isixazululo sesitolo esisodwa
Isitolo esikhulu esisha
Sihlinzeke ngosizo ngokulandelana e-Hebei, Gansu, Guangdong, Inner Mongolia nase-Hubei kusukela ngo-1999. Ngokufika kweminyaka engu-4G, i-China Mobile inxuse ukuvela kwesithombe sesizukulwane esisha, futhi izinsiza zokuxhumana ngobuchwepheshe obuqinile zizizwa zidlala phambili emisha. Ngalesi nje, sihlanganise imvelo, izinsiza, amalambu kanye nezinto zokusebenza ndawonye. Kuyaziwa ukuthi izinsizakalo zethu zidlulisa umyalezo nesithombe seChina Mobile kangcono.
House I-NIO House） Isikhungo sama-24 seNio eHarbin Changhong sihlinzeka ngezinsizakalo zokwakha izitolo zeNIO House eHarbin. Njengesikhungo sokuqala se-nio ezifundazweni ezisenyakatho-mpumalanga, iNIO House itholakala edolobheni & ...
IChanghong Exhibition Center Firs ...
Ngo-Ephreli 25, umkhosi wokuklomelisa weChina International Space Design Competition Hebei Division kanye ne-Hebei Architectural Decoration Industry Association 2019-2020 Wezobuciko Bokuqamba Ubuciko ...
Ingqungquthela ye-CCDF Technology _ Ass ...
IKomidi Lokuhlela Lenkomfa Yokuqala Yezokwakhiwa Kwezezimboni kanye neForamu Yentuthuko Yezokuhlanganiswa Kwezimboni kanye neNgqungquthela Yonyaka YaseCCDF China Commercial Display Prop Technology yenziwa futhi yasungulwa ...
Inkanyezi ye-6thC izovulwa ku-S ...
Abahlinzeki bezixazululo ezisezingeni eliphakeme abayi-140 + abavela emikhakheni emihlanu, kufaka phakathi okufakwa esitolo nemishini yokuthenga, ukwakheka kwesitolo, ukuthengisa okubonwayo, ubuchwepheshe bokuthengisa obuhlakaniphile, i-lig ...
UKUBONISANA NGAMAHHALA 86-13930196800
IKHELI 26F., Shangde Plaza No.8 Kangle Street Shijiazhuang China